सफलताको निम्ति समय व्यवस्थापन ः मन्त्री गाेकर्ण बिष्ट-Setoghar
सफलताको निम्ति समय व्यवस्थापन ः मन्त्री गाेकर्ण बिष्ट
सफलताको निम्ति समयको व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समयको व्यवस्थापन वैज्ञानिक तवरले गर्नुपर्ने मान्यता लिएर अघी बढेका युवा नेता गोकर्ण विष्ट आफू अहिलेको अवस्थामा पुग्न सक्नुमा पनि समयको उचित व्यवस्थापनलाई नै कारक तत्व मान्छन् । नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पार्टी सचिव गोकर्ण विष्ट समयको व्यवस्थापन गर्ने कार्य जटिल हुँदाहुँदै पनि आफूले कुन कामको निम्ति कति समय छुट्याउने हो, सोही बमोजिम योजनावद्ध रुपमा अघी बढ्न सके आफूले निर्धारण गरेको सफलताको लक्ष्यमा पुग्न असम्भव नहुने अनुभव सङ्गालेका छन् ।
गोकर्ण विष्ट, मन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
आफू कुन क्षेत्रमा छु भन्ने कुरा बुझेर सोही बमोजिम योजनावद्ध रुपमा आफूलाई अघी बढाउनुपर्ने भन्दै विष्ट भन्छन्, ‘तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने कुन विषय कतिबेला कति पढ्ने र खेलकुद तथा अन्य कार्य कतिबेला गर्ने भन्ने योजना बनाएर त्यसै बमोजिम अघी बढ्नुस् । तपाईं जागिर गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने जागिर गर्ने समय कुन हो ? त्यसलाई उपयुक्त हुने किसिमले अन्य कामहरु पनि गर्नुस् । जुनसुकै क्षेत्रमा रहेपनि नियमित अध्ययनलाई भने अघी बढाईरहनुस् । अध्ययन जीवनलाई सार्थक बनाउनको निम्ति निकै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ ।
यदि तपाईं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा समेत हुनुहुन्छ भने समय व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यद्यपि तपाईंले कति समय सामाजिक कार्यमा लगाउने, राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिले बर्षभरिमा कति समय कुन कामको लागि छुट्याउने, कुन मिटिङ कहिले राख्ने, बर्षमा कतिओटा रचनात्मक कार्यहरु गर्ने, सङ्गठन विस्तार र आर्थिक व्यवस्थापनको निम्ति कसरी समयको व्यवस्थापन गर्ने, को सँग कसरी प्रस्तुत हुने ? भन्ने किसिमले योजनावद्ध रुपमा अघी बढ्नुहोस् । चुनौती धेरै हुँदाहुँदै पनि अवश्यम्भावी छ ।
नेपालीहरुका चाडपर्व बढी हुँदा विकास कार्यमा बाधा ः
नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यहाँ विभिन्न जातीहरु छन् । जाती पिच्छे छुट्टाछुट्टै रीतिरिवाजहरु छन् । यस्तो अवस्थामा बर्षभरिमा विभिन्न जाति र धर्ममा आवद्ध व्यक्तिहरुका चाडपर्वहरुले करिब आधा समय लिने र सोही बमोजिम प्रत्येक पर्वमा विदा दिइने चलन नेपालमा छ । यस्ता चाडपर्वहरुको कारण करिब आधा समय नै खर्च हुने गरेको छ । यसले गर्दा हामीलाई सामाजिक रुपमा अघी बढ्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
चीनबाट सिकौं ः
राजेन्द्र पाण्डे सहितको आफ्नो नेपाली टोली चीन भ्रमणको क्रममा जाँदा विष्टले थाहा पाए कि आफूलाई करिब १ महिना पहिले नै समय बुकिङ गराएर भ्रमणको निम्ति बोलाईएको रहेछ । सातौं तहका एकजना व्यक्तिलाई भेट्नको निम्ति करिब डेढ महिना पहिले देखि नै समय बुकिङ गराई चीन भ्रमणको अवसर पाएका विष्टले चीनमा समय व्यवस्थापनलाई विशेष महत्वको साथ लिएको कारण नै चीनको विकास अहिलेको अवस्थामा पुगेको कुरा राम्रोसँग बुझ्न पाए । चीन भ्रमणको क्रममा आफूलाई केवल ४५ मिनेटको निम्ति मात्र समय उपलब्ध गराइएको त थाहा पाएका थिए । सोही समयमा चिनियाँ व्यक्तिलाई भेटेका विष्ट आफूसँगको भेटमा केही थप समय पनि बिताउनेमा आशावादी थिए होलान् तर विष्टको त्यो थप ती उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफूसँग बिताउने मनमा गढेको आशाले भने पूर्णता पाएन । अर्थात ती चीनियाँ व्यक्ति आफूले उपलब्ध गराएको समय भन्दा १ मिनेट पनि बढी समय आफ्नो लागि उपलब्ध गराएनन् । आफूबाट बिदा हुने क्रममा विष्टले नेपालमा भ्रमणको निम्ति उनलाई आग्रह गरे । तर त्यहाँको परिस्थिति नबुझी गोकर्ण विष्ट, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेपालीहरुको समूहले गरेको आग्रहको सिधै अस्वीकार गरियो । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा गोकर्ण विष्टले यो खुलासा गरेका हुन् । यसले आफुलाई निकै चकित पारेको बताए । चीनको यो घटनाबाट आफूले सिकेको समय व्यवस्थापनको पाठ अन्य नेपालीहरुले पनि सिक्न सक्ने र सोही बमोजिम समय व्यवस्थापनको पहल गर्नेमा गोकर्ण विष्ट आशावादी छन् ।
चीनका उच्च पदस्थ व्यक्ति नेपालमा आउने चाहना नभएको कारण ती चिनियाँ उच्च पदस्थ व्यक्तिले नेपाली टोलीको आग्रह अस्वीकार गरेका होइनन् । यसको कारण थियो कि समयतालिकाको बन्धनले निम्त्याएको व्यस्तता । ती चिनियाँले थप समय निकाल्नको निम्ति नेपाली प्रतिनिधि पात्रहरुको अगाडि तीनओटा सर्त तेस्र्याए ।
१) आफूबाट कि त पार्टीले कार्यतालिका बदलिइदिनुपर्छ
२) सरकारले कार्यतालिका बदलिइदिनुपर्छ ।
३) विरामी भएर काम गर्न नसक्ने हुनुपर्छ ।
अन्यथा आफूलाई आधा घण्टा पनि समय निकाल्ने फुर्सद नभएको बताएसँगै नेपाली टोलि नाजवाफ भयो ।
सोही बमोजिम नेपालीहरुले पनि समयको महत्व बुझेर समय व्यवस्थापन गर्न सके आफूले लिएको लक्ष्यमा पुग्न सकिने युवा नेता गोकर्ण विष्ट बताउँछन् । नेपालीहरुमा अहिले सम्म कोही पनि त्यसरी समय व्यवस्थापनमा लागेको आफूले नभेटेको बताउँदै राजनेताहरुलाई समेत इंगित गर्दै विष्ट भन्छन्, ‘नेपालमा हाम्रो स्वभाव अलि फरक छ । हामीले माइक पायौं भने सके सम्म आफूले कसरी अरुलाई लामो समय गाली गरेर आफूलाई सक्षम देखाउन सक्छौं भन्ने हाम्रो अभ्यास छ । यसैमा हामी आफूलाई गौरवान्वित ठान्छौं । तर यो स्वभावलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।’ लामो समय बोलेर आफू सफल नभइने समेत बताउँदै विष्टले समय व्यवस्थापनको आफ्नो अनुभव र दृष्टिकोणलाई बिट मारे ।
खेलमा अन्तिम गोल महत्वपूर्ण हुन्छ ः
खेलमैदानमा खेलाडीहरु खेल शुरु भएपश्चात् कुन रुपले प्रस्तुत भए भन्ने विषय त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको त परिणाम नै हो । हामीले पनि हाम्रो परिणाम कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
लोक गायक कुमार सुवेदी मलेसियामा साङ्गितिक क्षेत्रमा।
साहित्यकार करण तामाङ गीत सङ्गितमा पनि ब्यस्त।